के ओली–प्रचण्ड सम्बन्धमा दरार पैदा भएकै हो ? - Dainik Nepal
के ओली–प्रचण्ड सम्बन्धमा दरार पैदा भएकै हो ?
निर्मल भट्टराई २०७५ वैशाख ३१ गते ७:५०
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तीन दिने नेपाल भ्रमणले एमाले – माओवादी एकता प्रक्रिया ओझेलमा परेको छ । धार्मिक उदेश्य सहित बोकेर नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसङ्ग प्रधानमन्त्री ओलिले नेपाल भारत सम्बन्धमा विगतमा देखिएको चिसोपन हटाउन ठुलो प्रयत्न गरेको र राष्ट्रहितमा पारदर्शी ढंगले काम गरेको प्रष्ट हुंदाहुदै यही प्रशङ्गलाइ आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने प्रयत्न यसपालि भरपुर गरेको देखियो । प्रतिपक्षी वृत्तमा यसो हुनु अस्वभाविक नलागे पनि सत्तारूढ दलभित्र आफ्नो गठबन्धनभित्र बाट प्रधानमन्त्री ओलीलाइ खुइल्याउन निकै कसरत गरिनु निकै अशोभनीय विषय हो ।
माओवादी केन्द्रनिकट अन्लाईनहरुले मोदी भ्रमणसङ्ग जोडेर ओलीलाइ निरन्तर नकारात्मक टिप्पणी गरिरहे । माओवादी कार्यकर्ताले ओलीको राष्ट्रवादलाइ घीनलाग्दो तरिकाले सामाजिक संजालमा विरोध गरिरहे , अध्यापी गरिरहेका छन् । मोदीको स्वागत कार्यक्रमलाई माओवादी मन्त्रीहरुले बहिष्कार गरे भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मोदीलाइ छुट्टै भेट गरेर ओलीभन्दा क्रान्तिकारी बन्न ठुलै कसरत गरे । अहिले माओवादी मन्त्रीहरु ओलीको उजुरी प्रचण्डसङ्ग गर्न थालेका छन् ।
उर्जा मन्त्री वर्षामान पुनले प्रचण्डलाई यतिसम्म भने-” अध्यक्षज्यू तपाईंले एक पटक प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग फाइनल कुरा गर्नुहोस्, उहाँले यस्तैगरी पेल्दै जाने हो भने हामी काम गर्न सक्दैनौं, उहाँले मन्त्रालयको कामकारबाहीमा समेत हस्तक्षेप गर्दै आउनुभएको छ, हामी माओवादीबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरुलाई काम गर्न निकै गाहो भएको छ ।’ यो ओली प्रचण्डविचमा दरार ल्याउने ग्र्याण्ड डिजाइनको एक कडी हुन सक्छ ।किनभने कुनै मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको सहमति बेगर कुनै काम गर्न सक्दैन भन्ने बर्षामान पुन जत्तिको नेतालाई थाहा नभएको विषय पक्कै होइन ।
केही मानिसलाई के लागेको छ भने ओलीको राष्ट्रवादी छवि धुमिल्याउन सके सिङ्गो एमालेलाई सिध्याउन सकिन्छ । यो सरकार तुरुन्त ढाल्न सकिन्छ । र, देशलाई विगतमाझैं अस्थीरतामा धकेल्न सकिन्छ । तिनै मानिसलाई यो पनि लागेको छ- एमाले- माओवादी एकताको अन्तिम तयारीमा जुटेका ओली र प्रचण्डको विचमा दरार पैदा गराएर त्यसको शक्तिमा बनेको बहुमतको सरकारलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ । त्यो प्रयोजनका लागि उनीहरू प्रचण्डलाई आफ्नो कांधमा राखेर नचाउन चाहन्छ्न ।
गत निर्वाचनमा जनताले बामपंथी गठबन्धनलाई दिएको प्रचण्ड बहुमत , पार्टी एकताको लागी जनताको एकोहोरो दबाब र एमालेले खेलेको समन्वयकारी र सन्तुलनकारी भूमिकाको कारण जोगिदैं आएका माओवादी केन्द्र र यसका अध्यक्ष प्रचण्डले आम जनताको चाहना विपरीत उनले गरेको भाषणमाझैँ अर्कै छलाङ मार्ने हुन कि भन्ने शंका व्यक्त हुन थालेको छ । तर ऊनीसंग अब एक छलाङ मात्र बाकी छ -एमालेसङ्ग एकता तोडेर एमाले बाहेकका दलसङ्ग मिलेर सरकार बनाउने । यो छलाङ त ऊनी र उनको पार्टीको लागि आत्मघाती छलाङ हुनेछ ।
नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार अहिलेको शासकीय प्रणाली प्रधानमन्त्रीय प्रणाली हो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दैनिक कार्य सम्पादन गर्न कसैलाई सोध्दै हिड्नु पर्दैन । मुख्य विषयमा गठबन्धनका सहभागी दलसंग सार्थक परामर्श लिने काममा हालसम्म कुनै तल वितल भएको छैन र हुनु पनि हुदैन ।
पार्टी एकता निश्चितै रुपमा निस्चित मापदण्डको आधारमा हुने हो । एमाले र माओवादीले नेतृत्व गर्ने जनताको संख्याको अनुपात नै पार्टी को संगठनात्मक एकताको प्रमुख आधार हो भने बढी भन्दा बढी जनताले रुचाएको वा रुचाउने विचार नै पार्टी एकताको प्रमुख वैचारिक आधार हो । यी दुई प्रमुख आधारलाई छोडेर एकता हुनै सक्दैन । यी आधारभन्दा पर गएर राखिने सर्त , माग वा अडान केवल बखेडा मात्र हुन ।
पार्टी एकतालाई साच्चै निष्कर्षमा पुर्याउने हो भने ओली र प्रचण्ड्ले पार्टीभित्र र बाहिरका एकता विरोधी गुट र व्यक्ति लाई चिन्न सक्नुपर्छ । आफ्नो पद गुम्ने भयले एकता हुन नदिन गरिने नचाहिदो दबाबबाट दुबै नेता सबैभन्दा पहिले मुक्त हुन सक्नुपर्छ ।
सरकारको कामकारबाहीमा एकरुपता ल्याउन पनि पार्टी एकता गर्न अति आवश्यक भैसकेको छ । चुनावमा गरिएको वाचा गर्न, आर्थिक समृद्धिका अजेन्डा अगाडि बढाउन ,देशीविदेशी दक्षिणपन्थी शक्तिको सामना गर्न बलियो कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको निरन्तरताको लागि एकताम दरार पैदा गर्ने छुट प्रचण्ड वा ओली कसैलाई छैन ।